Qubanaha » Doorashada Galmudug oo Dib Loo Dhigay Sababta oo ah……
Doorashada Galmudug oo Dib Loo Dhigay Sababta oo ah……
Doorashada Madaxweynaha Galmudug ee lagu waday inay dhacdo 10-ka bishan ayaa dib loo dhigay, iyadoo ugu dambeyn maamulka Galmudug uu aqbalay codsigii Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ee ahaa in doorashada dib loo dhigo muddo 45 cisho ah.
Wafdi uu hoggaaminayay Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdi Faarax Juxa oo shalay gaaray Cadaado ayaa wada hadalo la yeeshay Ku simaha Madaxweynaha Galmudug, Guddoonka Baarlamaanka iyo guddiga doorashada Madaxweynaha.
Wada hadaladan oo muddo saacado qaatay ayaa la isku afgartay in doorashada Madaxweynaha ay dhacdo 30-ka bishan April, iyadoo inta ka horeysana la dhameystiro dib u heshiisiinta Maamulka Galmudug iyo Ahlusuna.
Xubnaha wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha oo ay ka mid ahaayeen Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo Aqalka sare ayaa kala hadlay Maamulka Galmudug, sidii ay u aqbali lahaayeen in maamul mid ah oo loo dhan yahay loo dhisi lahaa.
Dowladda Federaalka ayaa cadaadis ku saareysay maamulka Galmudug, in dib loo dhigo doorashada, si fursad loo siiyo Maamulka Ahlusuna oo horay u dalbaday in doorashada dib loo dhigo, si ay uga qeyb galaan.
Guddiyo ka socda Ahlusuna iyo Galmudug ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda wada hadalo u furmo, waxaana wada hadaladan garwadeen ka noqon doona dowladda Federaalka.
Maamulka Ahlusuna ayaa lagu wadaa inay ku soo biiraan Galmudug, iyagoo xubno ku yeelan doona Baarlamaanka, waxaa kaloo la isla dhex marayaa in la siin doono Madaxweyne kuxigeenka Galmudug.